Duulaanka Sare-sare - Xiliga 2 Taariikhda Premier + Dhammaadka La Sharaxay - Muuqaalka Cradle
Xilliga Soo-Kicitaanka-Sare-kaca 2 Taariikhda Soo-saarista
Leave a Comment Duulaanka Sare-sare - Xiliga 2 Taariikhda Premier + Dhammaadka La Sharaxay
Haddii aad hadda dhammaysay duullaankii High-Rise Invasion taxanaha anime ee "caanka ah" ee ku soo gurguurtay Netflix dabayaaqadii Febraayo 2021 markaas waxaad u badan tahay inaad la yaabban tahay haddii ay jiri doonto xilli kale oo anime ah "canaqsan". Hagaag waxaad ku jirtaa nasiib sababtoo ah maqaalkan waxaan ku dhex mari doonaa waxa aan ka naqaano Koritaanka Sare ee Xiliga 2, wakhtiga ay sii deyn doonto oo sharaxi doonto dhamaadka "cajiibka" dhamaadka xilli ciyaareedka 1. Markaa suunka geli, geli " maaskaro” shid oo u diyaar garow inaad u kacdo koonka Duulaanka Sare u kaca si aad u hesho maqaalkan dhamaystiran oo rajo leh oo faa'iido leh. Waxaa jira qaswadayaal waaweyn oo ka horreeya xilli ciyaareedka koowaad ee fadlan la soco.
Yuri kulankiisii ​​ugu horeeyay ee "mask"
Dulmar-Kac-sare Xiliga 2
Duulaanka High-Rise wuxuu leeyahay sheeko aad u fudud in la raaco, waxaana loo dejiyay qeybta koowaad, iyadoo jilayaasha (gaar ahaan kan ugu weyn) ay si cad noogu sheegaan wax walba oo dhacaya iyo jebinta bandhigga ha u sheegin xukunka iyo dhaaftay. Waan ogahay in Ingiriisida aan ugu yeerno " Quudinta Qaadada "laakiin waxaan qiyaasayaa dhagaystayaasha tani waxay noqon kartaa lagama maarmaan sababtoo ah way adagtahay in la raaco haddii High-Rise Invasion uusan lahayn dub. Jilaagii ugu weynaa ee la magacaabay Yuri Honjô waxay isku aragto meel dahsoon oo muuqaalka dunidu uu yahay kaliya Sky Scrapers. Yuri waxa uu ka soo muuqan doonaa Xiliga Duulaanka Sare ee 2 oo ay la socdaan qaar ka mid ah jilayaasha kale.
Haa, asal ahaan waan ogahay, waligay tan ka hor ma arkin. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo si adag isku dayaysa inay hesho walaalkeed ka weyn Rika waxay aragtay bini'aadamkan qariibka ah oo ay ugu yeedhay waji-xidho. Kuwaani si toos ah uma dilaan halkaas dhibanayaasha, laakiin waxay u kaxeeyaan heer dhib iyo quus ah si ay naftooda u qaataan. Waxay tan sameeyaan iyagoo ka boodaya dhismayaasha ilaa dhimashadooda hoose. Sheekada inteeda kale ayaa daba socota Yuri isku dayaya in uu raadiyo meel uu ka baxo oo uu la mideeyo bini'aadamka kale ee ay isku booska yihiin.
Muuqaalka Dhimashada Sarkaalka Booliska - Duulaanka Sare ee Xiliga 2
Hadda adiga (sida celceliska daawadayaasha anime) waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay jilayaasha ku jira Duulaanka Sare ee Sare laakiin xaqiiqdii ma aanan samayn oo si kooban ayaan u sharxi doonaa sababta. In badan oo dhamaantood ah waa jilayaal anime ah oo leh muuqaal asal ah iyo qayb gaar ah laakiin leh astaamo iyo wada hadal isku mid ah ayaanu aragnay (ama aniga oo keliya) mar kale dib loo warshadeeyay. Haddaba hoos waxaan ku haynaa:
Yuri - jilaa caajis ah oo caadi ah oo aan lahayn shakhsiyad soo saarta isla khadadka trope anime-ga hore ee hore. Waxay leedahay timo madow oo dhaadheer, indho bunni ah waxayna u malaynaysaa inay tahay tan ugu xidhiidhsan (muujinta xitaa taasi way ku guul darraysatay). Iyadu waa soo jiidasho leh, oo madax adag oo aad u cad oo ay adag tahay in loo naxariisto, dabcan waxay leedahay walaal tani waxay siinaysaa wax ay ku riixdo laakiin taasi waa ku saabsan.
Markaa waxaan haysannaa tom-wiil dabeecadda oo xulafo la noqota Yuri qeybta labaad. Waxay la mid tahay caajis Yuri oo ma jirto wax iga dhigaya inaan daneeyo iyada, marka laga reebo inaan ku dhiirado inaan sheego sheeko-hoosaadka nacasnimada ah ee ku saabsan taariikhdeeda rabshadda ah ee ku saabsan qoyskeeda. Sida cad waxay si qarsoodi ah u leedahay jacayl Yuri Taxanuhuna haba yaraatee ma dhibsado in uu ka dhigo mid qarsoon.
Dabadeed dabcan waxaan haysanaa ditsy, hawo-mareen, bimbo-jilicsan cod jilicsan oo sarreeya oo la yaabban sida kala badh 5-ta qaybood ee ugu horreeya xitaa aan ka libdhin ama ka cararin marka maaskaro ay ujeeddo qoryo raran ah iyada. Oooh, uhh, ww-maxaad qorigaas u beegsanaysaa m-me mudane? Waxaan magacaabi karaa ilaa 10 anime oo ka baxsan madaxayga sare ee aan ku arkay sifadan ka hor Keijo ilaa Amagi Park Brilliant, Highsool Of Dead iyo wixii la mid ah (ma rabo inaan ku caajiso).
Dabcan ugu dambayntii waxaan haysanaa walaalka weyn ee ilaaliya oo aad u qurux badan. Isagu waa caajis sida Yuri wuxuuna leeyahay shakhsiyadda gabal alwaax ah. Si kastaba ha ahaatee waxa uu u muuqdaa in uu yahay ka kaliya ee si dhab ah u yaqaan waxa socda oo dabeecadiisa si joogto ah loo isticmaalo in lagu quudiyo macluumaadka maaskarada, sida ay ugu danbeeyeen aduunka iyo si joogto ah u wacaya. Yuri oo buuxinaya iyada. Waxaan u maleynayaa inuu u malaynayo inuu ahaado agagaarka 18 Waxaan rajeynayaa sida Yuri loo maleynayo inuu aad uga yar yahay isaga taasina waxay ka dhigi doontaa goobta weerarka galmada Yuri qeybtii hore ayaa ka sii daran.
Dhammaadka Duulaanka Sare u kaca
Maaskarada Toogashada Ah Oo Madaxa Qaada Shiyo - Duulaanka Sare ee Xiliga 2
Hadda si loo fahmo haddii kale iyo in kale waxaa jiri doona xilli kale oo ka mid ah Duulaanka Sare ee Sare waxaan u baahanahay inaan eegno dhamaadka xilli ciyaareedka ugu horeeya. Markaa dhamaadkii waxay arkeen Yuri oo ku caasiyay xeerarka adduunka. Waxa kale oo aanu marqaati ka nahay iyada oo xaday awoodda waji-xidhka iyadoo Rika ay ku xayiran tahay qol ay ka buuxaan waji-xidho. Waxaan sidoo kale aragnaa kooxaha kale oo sugaya inay arkaan natiijada. Muuqaalka ugu dambeeya ayaa muujinaya Yuri oo sheegaysa inay badbaadinayso walaalkeed oo ay guriga aadi doonto sida ay hadalka u dhigtay. Tani waxay dejinaysaa marxaladda Duullaanka Sare ee Xilliga 2 laakiin tani miyaynu helaynaa mid kale? Sii wad akhri oo waad ogaan doontaa.
Duulaanka Sare-sare ma heli doonaa xilli kale?
Yuri Oo Heshay Meyd Iyo La Yaab La'aan Ah Oo Aan La Fasarin Dhammaan - Duulaanka Sare ee Xiliga 2
Markaa hadda oo aynu madaxdeenna ku soo koobnay jahawareer laakiin dhammaad aan la soo koobi karin ayaa kuu ogolaanaya sababta aad runtii halkan u joogto. Waxaan kuugu sheegi karaa kalsooni weyn laakiin ma aha dammaanad 100% ah duulaanka Sare ee Sare doono heli xilli kale. Sababo badan baa jira, waxaanan hoos ku tilmaami doonaa:
258 ka mid ah cutubyada la daabacay ee ku yaal Manga-Rise Invasion Manga, 149 cutub ayaa daboolay oo habeeyey anime-ka, oo ka tagay in ka badan 100 cutub. Tani waxay ka dhigan tahay waxa ku jira Xilliga Duulaanka Sare ee Sare ee 2 ayaa jira mana jiraan wax ka joojinaya PC-ga inuu abuuro xilli kale.
Netflix waxay leedahay taariikh ah inay siiso xilliyada labaad anime xitaa haddii aysan aad u guulaysan, waxaan ula jeedaa kaliya eegno Seven Seeds. Aad ayaan u necbahay anime-kaas oo ma aan rumaysan karin markii Netflix cagaaran u shiday xilli kale (halkan ka akhri dib u eegistayda todobada abuur). Haddii Netflix ay bixiso bandhiggaas xilli kale, waxaad si hubaal ah u odhan kartaa in Kor-u-kaca Duulaanka uu heli doono xilli 2, oo loo arko in qiimaynta 7 Seeds ay ahaayeen kuwo aad u xun iyo qiimeynta Duulaanka Sare ee Sare ayaa aad uga fiicnaa.
Sida aan si dhab ah u sheegay soo afjaridda Duulaanka Sare-sare ma ahayn mid dhammaystiran oo wax badan ka tagay waxa xiga ee dhici kara. Waxaan wax badan ka baranay waxa loo yaqaan 'Masks' markaas waligeen waanu haysanay, iyo khudbadii yaraa ee Yuri ee dhamaadka asal ahaan waxay sii kordhisay socodsiinta Duullaanka Sare ee Xiliga 2 ee qof walba madaxa oo ay ku jirto nasiib daro. Dhammaadka sidaa loo qaabaysan maayo haddaanay hore u qorsheynayn inay xilli kale oo duulaan sare ah yeeshaan.
Goorma ayuu Sare u kaca Duulaanka Xiliga 2?
Yuri wuxuu ku dhow yahay in lagu qasbo inuu xidho maaskaro - Duulaanka Sare ee Xiliga 2
Waxaan dhihi lahaa marka la eego wax kasta oo aan kor uga hadlay in xilli-ciyaareedka cusub ee duullaanka sare-u-qaadista uu ku dhow yahay geeska. Waxaan arki doonnaa tan dhammaadka sanadkan (2021) ama bilowga 2022. Malahaygu wuxuu noqon doonaa 2022 malaha Janaayo ama waxay u badan tahay Febraayo maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee la sii daayo.
Si kastaba ha noqotee waxaan dhihi karaa si hubaal ah waxaa jiri doona Xilliga Duulaanka Sare ee Sare ee 2 waa wax hubaal ah fikradeyda. Haddii aysan jirin, hubaal ma dafi doono wax hurdo ah ama ilmo ka badan, dhab ahaantii waxaan abuuri karaa maqaal dib u eegis shakhsi ah oo loogu talagalay Duulaanka Sare ee Sare si aan u bixiyo aragti qoto dheer oo ku saabsan cabashooyinkayga iyo ammaanta bandhigga. .
Aad baad ugu mahadsantahay akhrinta Waxaan rajeynayaa in dib u eegistani ay kaa caawisay inaad hesho jawaabta wax kasta oo aad raadineysay. Sida had iyo jeer leh maalin qurux badan oo nabad qabo!
Haddii aad Tageer u tahay Duulaanka Sare u kaca Hubi shaygan:
Dhawr gujin oo kaliya waxaad ku ciyaari kartaa adiga Yuri Honjo ka Anime ah Duulaanka Sare u kaca. Labbisku waa sidaas Dhexdhexaad Waxaad si qurux badan u ciyaari kartaa dabeecad kasta oo Anime ah ama qof kasta oo adiga ah dooran taas darteed.
Labbiska ayaa la socda a 60 maalin lacag damaanad dib sida dhammaan alaabta saaran crdleviewstore.com iyo goobta sharafta leh maraakiibta in ka badan Dalalka 185 oo si la yaab leh u bixisa dhoofin bilaash ah oo dhan alaabta!
Haddaba maxaad sugaysaa? Kaliya $18.00 shaygani wuxuu noqon karaa adiga! Hadda iibso ka hor inta aan la iibin crdleviewstore.com
Maqaallo kale oo aad akhrido:
Gelitaan Hore Xidigta Instagram Jeon Yebin [전 예빈] Waxay Ku Muujineysaa Bikini Cusub Instagram Post
Gelitaanka Xiga Instagram Star Jeon yebin [전 예빈] Taageerayaasha Stuns ee New Bikini Instagram Post